I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Aria & Ben
"I-Gumbo Limbo's Dreaded Grape" - isengezo sakamuva sempahla yeGumbo Limbo!
I-Dreaded Grape yayikade iyibha yewayini ethokomele e-Caye Caulker ehanjiswe endaweni ye-The Gumbo Limbo futhi yaguqulwa yaba indawo yokuqasha iholide. Ikhabethe elizimele lisenayo yonke intelezi yebha yewayini ehlanganisa ibha ye-rosewood enhle manje esebenza njengengxenye yekhishi. Ivulandi embozwe yangasese enendawo yokubeka iwayini ehlotshisiwe inikeza umthunzi owudingayo ukuze ujabulele ukubuka kwengadi kwekhabethe.
Le khabethe elihle elincane elizimele lihamba ibangana nje ukusuka edolobhaneni, nokho likude ngokwanele ukuze ujabulele ukuthula kwangempela nokuzola.
I-Dreaded Grape inikezela ngesipiliyoni sokuhlala esiseceleni futhi iza nabanikazi abazinikele ekuqinisekiseni ukuthi ukuhlala kwakho kuntofontofo.
Ilungele abantu abangu-1 noma 2 abafuna indawo yokucasha eshisayo, ikhabethe litholakala nje ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka olwandle ukudlula uthango olubiyelwe endaweni eseduze, okuvumela ukufinyelela okuqondile olwandle.
I-Dreaded Grape inegumbi lokuhlala / lokulala elihlanganisiwe elinombhede wendlovukazi, indawo yokuphumula nekhishi elinefriji, i-microwave ne-AC. Ukugeza kwangasese ngamanzi ashisayo nabandayo. Idekhi ekhaviwe yangasese enetafula nezihlalo kanye ne-grill yangaphandle kanye namabhayisikili atholakalayo kanye ne-Wifi kwenza leli khabethe libe likhulu kakhulu.
Kunamatekisi amaningi ezinqola zegalofu esiqhingini noma unamabhayisikili amahhala ongawagibela. Futhi, kuyimizuzu eyi-10 kuphela. hamba uye emzaneni.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kodwa sihlala sitholakala uma udinga okuthile.
Ibungazwe ngu-Aria & Ben
UAria & Ben Ungumbungazi ovelele